Soomaaliya oo la safatay Sacuudiga oo xiriirka u jaray Canada | Radio Hormuud
Soomaaliya oo la safatay Sacuudiga oo xiriirka u jaray Canada
Muqdisho (RH)- Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay khilaafka diblumaasiyadeed ee u dhaxeeya waddaamada Saudi Arbia iyo Canada oo xiriirkooda uu gaaray meeshii ugu xumaa ebid.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda, oo ku qoran afka Carabiga ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay garab taagan boqortooyada Sacuudiga isla markana ay ku xuntahay khilaafka diblomaasi ee labada waddan.
Xiriirkii diblomaasi ee Sacuudiga iyo Canada ayaa xumaaday kaddib markii dowladda xukuumadda ay Axaddii ku dhawaaqday in ay joojisay xiriirkii ganaci eek ala dhexeeyay Ottowa isla markaana u yeeray danjirihii u fadhiyey Ottowa halka danjirahii Canada ee Riydadh loo qabtay inuu muddo 24 saac gudahood uga baxo Sacuudiga.
Muxuu salka ku hayaa Khilaafka Sucuudiga iyo Canada
Go’aankan sidan u culus ayaa yimid kaddib markii dowladda Canada ay ku baaqday sii deynta Raif Badawi iyo Samar Badawi oo ah walaalo u dhashay dalka Sacuudiga walow Samar Badawi bil ka hor isaga qoyskiisa ay qaateen dhalashada Canada.
Labadan walaalaha ayaa lagu xiray Sacuudiga, waxaana dowladda ay ku xukuntay in lagu garaaco 1,000 jeedal maadama ay aflagaadeen diinta Islaamka.
Qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo ka muuqday carro ayaa waxa lagu sheegay in dowladda Sacuudiga aysan aysan aqbalin isla markaana aqbali doonin in la soo faragaliyo arrimaha gudaha waddankiisa hadalka Canadana uu yahay mid ka dhan ah madax bannaanida Sacuudiga.
Marka laga tago Soomaaliya, waxaa kaloo go’aanka Sacuudiga uu xiriirka uga jiray Canada soo dhaweeyey waddamada Khaliijka sida Imaaraadka, Baxrayn iyo Kuwait.